कथा : जीवन र पीडा - Safal Stories
Home Short Stories कथा : जीवन र पीडा
कथा : जीवन र पीडा
रोशनलाई जिन्दगी देखि वाक्क लागिसकेको थियो । उसलाई भागेर एक्लै कतै जाउँ जस्तै भइरहेको थियो । रोशनको परिवारलाई पनि ऊ डिप्रेसनमा जान्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको थियो ।
एकदिन रोशनले थाहा पायो कि, उसको गाउँ नजिकैको अर्को गाउँमा एकजना प्रसिद्ध ज्योतिष आएका छन्, जसले व्यक्तिको भविष्य बताइदिन सक्छन् र उनले गरेको भविष्यवाणी आजसम्म पुगेको छ ।
रोशन आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित थियो । ऊ आफ्नो वर्तमान देखि दिक्क थियो । त्यसैले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्ने र भविष्य बारे बुझ्ने चाहनाले ऊ सादुकहाँ गयो । सादुलाई उसले आफ्नो सबै पीडा सुनायो ।
सादुले उसको कुरा ध्यानपूर्वक सुने । त्यसपछि बाहिर गएर हातमा कचौरा र गिलास लिएर आए । एउटा हातमा भएको कचौरामा नुन थियो भने अर्को हातमा भएको गिलासमा पानी थियो । सादुले रोशनलाई उक्त कचौराबाट आफ्नो मुठ्ठीमा जति नुन आउँछ, त्यति लिने भने । रोशनले त्यही गर्यो । उनले फेरी त्यो नुनलाई गिलासको पानीमा राखेर पिउन भने । रोशनले त्यसै गर्यो । पानी एकदमै नुनिलो भएको थियो । उसले बल्ल बल्ल त्यो पानी पियो ।
रोशनले सोध्यो, ” अब म जीवनमा खुशी हुन सक्छु त ? ” सादुले त्यो नुनको कचौरा उसलाई दिंदै भने, ” अब यो नुन लगेर नजिकैको पोखरीको पानीमा राख । त्यसपछि त्यो पोखरीको पिउनु । त्यति गरिसकेपछि फेरी मकहाँ आउनु ” । रोशनलाई छिट्टै पीडाबाट मुक्त हुनु थियो । त्यसैले ऊ फटाफट पोखरी भएको ठाउँमा गयो र ज्योतिषले भने अनुसार गर्यो । अब आफ्नो पीडा हट्ने र खुशी रहने आशमा ज्योतिषकहाँ गयो ।
रोशनले आफूले सादुले भने अनुसार नै गरेको बताएपछि सादुले सोधे, ” नुन राखेपछि त्यो पोखरीको पानी पिउँदा, पानी नुनिलो भयो त ?” रोशनले उत्तर दियो, ” भएन ! पानी मीठो थियो ” ।
त्यसपछि सादुले सम्झाउँदै भने, ” त्यो नुन भनेको तिम्रो पीडा हो, जुन जीवनका परिस्थितिहरुले ल्याउने गर्छ । र, पानी भनेको तिम्रो सोंच हो । नुन गिलासमा भएको थोरै पानीमा राख्दा पानी नै नुनिलो भयो, तिमीलाई पिउन गाह्रो भयो । तर पोखरीमा पानी धेरै थियो । स्वच्छ पानी थियो । त्यसैले त्यसमा नुन राख्दा पनि त्यसले पानीलाई नुनिलो बनाउन सकेन । जब तिम्रो सोंच साँघुरो हुन्छ या नकारात्मक भावनाले प्रेरित हुन्छ तब थोरै पीडाले पनि तिम्रो दिमागलाई दुषित बनाइदिन्छ, तिम्रो सोंचमा नै पीडा भरिन्छ । जसले गर्दा त्यसले तिमीलाई सखाप पार्न पनि सक्छ । तर तिमीले फराकिलो सोंच राख्छौ, सकारात्मक सोंच राख्छौ भने तिम्रो पीडा पोखरीको पानीमा नुन बिलाए जसरि बिलाउँछ । त्यसैले आफ्नो सोंचलाई यति फराकिलो र सकारात्मक बनाऊ कि, त्यो पीडा त्यसमै घुल्न सकोस् । त्यसपछि मात्र तिमीले खुशी भेट्नेछौ ” ।
Previousडाक्टर सुसका प्रेरक भनाइहरु
Nextआफूले के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? आफैलाई गर्नुहोस् यी ५ प्रश्न